Ogaden News Agency (ONA) – Ururka Haweenka Ogadenya ee Seattle iyo Xubnaha Jaaliyadda iyo OYSU/Seattle oo Shir Isugu Yimid
Ururka Haweenka Ogadenya ee Seattle iyo Xubnaha Jaaliyadda iyo OYSU/Seattle oo Shir Isugu Yimid
Posted by ONA Admin	/ January 12, 2015
Seattle, WA: Ururka Haweenka Soomaalida Ogadenia ee Seattle ayaa shalay shir muhiim ah isugu yimid. Shirkan ayaa waxaa lagu marti-qaaday qaar kamid ah xubnaha Jaaliyadda iyo ururka OYSU iyada oo loogaga hadlay sidii kor loogusii qaadi lahaa halganka Ogadenia.
Waxaa madasha ka hadlay gudoomiyaha jaaliyadda mudane Cabdullahi Daahir oo isagu shirka furay kadibna soo jeediyey warbixin guud oo dal iyo dibadba ah. Waxaa isna khudbad muhiim ah goobta kasoo jeediyey Dr. Cali Maxamed (Ali Yare) oo isagu ka hadlay doorka ama kaalinta haweenka ay ka qaataan halganka Ogadenia. Isaga oo ku cel celiyey in haweenku yihiin laf-dhabarta halganka xaqa ah ee Soomaalida Ogadenia.
Haweenka Soomaalida Ogadenia ayaa ayaamahan dambe dhaq-dhaqaaqoodii sii xoojiyey, sida aad horey ula socoteenba waxaa magaalada Copenhagen ee dalka Denmark lagu qabtay shir weynihii ururka haweenka ee caalamka. Halkaas oo gudoomiye cusub loogu doortay abwaanadda qaranka Ogadenia Rooda Cabdi Gurey (Rooda Af-Janno).
Dhaq-dhaqaaqa iyo wax-qabka cusub ee haweenka ayaa waxaa la filayaa inuu wax weyn ka badalo caalamka oo idil gaar ahaan waddamada reer galbeedka.